UBettý, uSylvia kunye noLaura. Abafazi abathathu ababulalayo ngamaxesha amathathu | Uncwadi lwangoku
Abafazi abathathu ababulalayo
Ndifunde nje UBetty, inoveli yamva nje yombhali waseIceland I-Arnaldur Indridason, Elinye igama elikhulu lenoveli yolwaphulo-mthetho yaseNordic. Indihlalise iintsuku ezintathu, kodwa imfutshane nje kwaye ayithathi thuba lide. Yeyesibini ngu-Indridason ukuba ndiyifundile kuba, nangona bendiyithanda Umfazi oluhlaza, Andizange ndimthande umhloli wakhe U-Erlendur Sveinsson. Kodwa le yayiye yatsala umdla wam ngenxa yokujika kwebali eliqhelekileyo elapapashwa okokuqala ngo-2003.
Ngokwenene yahlukile ukuzithoba kwesona sithethe singcwele ye-noir kumfanekiso we femme fatale. Ukongeza, intle kakhulu Ukuchukumisa ubuqhetseba (kunye noviwo lomfundi kukhetho lwakhe). Kuyakothusa embindini kwaye ukubuyisele kwisipho, kude kube lelo xesha, ubunokukholelwa ukusuka kwiminyaka yama-50. Ngelixa uyifundayo, iimbekiselo. Abo laura y USylvia, de Vera ityhila y Howard ngokukhawuleza.
Con Ukuchukumisa kukaDashiel Hammett okanye uRaymond Chandler, Le noveli ayinanto yakwenza nezo zenze ukuba i-Indridason iphumelele. Zisusa zonke iifayile ze iklasikhi ngakumbi Mnyama North America kokubini ekubalisweni kwayo kunye nakwindlela eyakhiwe ngayo.
Abalinganiswa abane kuphela. Inkqubo ye- umbalisi wokuqala, umnini osisityebi weenqanawa zokuloba, umncedisi wakhe kunye nomfazi wakhe okhohlisayo, uBett ongenakuphikiswa. Umbalisi ubalisa ibali lakhe ejele. Ukuwa kwakhe esihogweni kubangelwe ngumnqweno ongathintelekiyo, umnqweno kunye nokuthambekela kwi-Bettý yokukhohlisa. Yonke ikhomishini ye Ulwaphulo-mthetho olugqibeleleyo. Ke, siyaya kwimibuzo abayenzayo kuye kwaye ingenwe libali lokuba kutheni kwaye waphelela entolongweni.
Ubuxoki nokungaqondani ezenza i itrama oko kuhamba khawuleza kwaye iphela ngesiqinisekiso soburharha apho kungenakho (kwaye bekungekho) ukuba kuphele. Izabelo zeBetý Ukudlula okungummangaliso ziqhelekile ngo-Fast's Sylvia kunye amandla okuthakatha kunye noLaura de Caspary.
Ithunyelwe kwi 1960, umbhali waseMelika Howard ngokukhawuleza (umbhali we I-Spartacus) Wayesekwi-Black-American Activities Committee eyaziwayo ngenxa yokudibana kwakhe neQela lamaKomanisi. Ke kuye kwafuneka asebenzise isibizo EV Cunningham ukutyikitya inxenye elungileyo yomsebenzi wakhe. Emva kwexesha, ukuphindaphinda okwahlukileyo sele kuthwele igama lakhe lokwenyani.
En USylvia sidibene no UAlan Macklin, umcuphi, umfundi we-inveterate kunye nomfundi wangaphambili wembali, uqeshwe ngusozigidi ukuba afumane umfazi ongaqondakaliyo Lowo umazi ngegama kuphela, uSylvia. Incwadi yemibongo ipapashiwe ngaye kwaye enkosi apho aya kufumanisa khona imbali ebukhali yexesha lakhe elidlulileyo. UMacklin uya kumkhangela kuhambo olulandela iinyawo ezimbalwa ezishiya intombazana kwilizwe liphela.
Kubhalwe ngu Vera ityhila en 1942, lo mbhali weenoveli, imidlalo yeqonga kunye nemidlalo yesikrini ephumelele udumo ngesi sihloko. Kwiminyaka emibini kamva Ndinobomi obungunaphakade kwi Ukulungiswa kwefilimu de UOtto Preminger, nge UGene Tierney kunye noDana Andrews Njengesibini esikhokelayo. Ithathelwa ingqalelo njenge yeklasikhi phakathi kweklasikhi ye-noir yefilimu.
Apha sinayo Ukuzingela kukaLaura, Yintoni inkanuko, isibindi kwaye amabhongo kakhulu, kodwa lo simfumene eswelekile ekhaphethini kwigumbi lakhe lokuhlala. Ngaba uya kuba Amadoda omthi abo bazama ukucacisa ukufa kwakhe okungummangaliso. Waldo lydeker, umbhali ome njengeyodwa owayefuna uthando lukaLaura; UShelby Carpenter, isithandwa sakhe, kwaye UMarc Macpherson, umcuphi ophanda eli tyala kwaye ngubani, njengabo bangaphambili, oya kuthi athobele isipelingi uLaura anaso kubo.
Into enomdla, ukongeza kwimbali yayo, kukusetyenziswa amazwi ahlukeneyo abalisayo. Ezi zinto zisebenza ngokungafaniyo, zingena kwiingcinga zabanye abalinganiswa kwaye ngamanye amaxesha xa zingekho. UWaldo Lydecker, uMark McPherson okanye uLaura ngokwakhe usibonisa imikhombandlela yokusombulula le ngxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UBettÃ½, uSylvia noLaura. Iifatales ezintathu zeefemmes kwii-eras ezintathu
Iindawo apho kubhalwe khona iincwadi zakho ozithandayo